Raadi Console: tilmaamaha oo dhameystiran - Maamul SEO-gaaga
Way fiicantahay, websaydhkaagu wuu nool yahay. Naqshadayntu waa hagaagsan tahay, waxyaabaha la soo koobay iyo waxaad hubtaa 100% inaad awood u leedahay inaad ubadalkaaga ku badasho rajo ama macaamiil. Waxaad bilawday inaad bilowdo ololeyaal ku saabsan helitaanka taraafikada: xayeysiinta khadka tooska ah, xoogaa warbaahinta bulshada ah, SEO-na waxay bilaabaysaa inay bixiso.
Dabcan, waad fahantay xiisaha SEO (tixraaca dabiiciga ah) si loo abuuro taraafig tayo leh hab waara. Laakiin sidee u maamuli kartaa SEO-gaaga? Tababarkan, waxaan idiinku soo bandhigayaa qalabka bilaashka ah ee ay bixiso Google: Console Search. Waa qalab ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo mar haddii barta internetka ay ku taal.
Tababarkan, waxaan ku arki doonaa:
sida loo dejiyo (loo rakibo) Raajo Console
sida loo cabiro waxqabadka SEO, iyadoo la adeegsanayo xogta kaliya ee laga helo Search Console
sida loo hubiyo tusmada saxda ah ee bartaada
sida loola socdo dhammaan dhibaatooyinka waxyeelleyn kara SEO-gaaga: mobilada, xawaaraha, amniga, ganaaxa gacanta ...
Search Console: tilmaamaha oo dhameystiran - Maamul SEO-gaaga Janaayo 10th, 2021Tranquillus
READ Abuur Ganacsi Internet Ah Oo Faa'iido Leh: Habka La Taaban karo!
horeIsku xirnaan Fudud (ku kasbo dakhligaaga ugu horreeya internetka)
socdaClickFunnels si aad u bilowdo - Miisaaniyad Hoose